Tsy miankina amin�ny habetsahan�ny fananany ny ain�ny olona.
�Famintinana marina tokoa ny Evanjely manontolo ny Fivavahan�ny Tompontsika�. �Tamin�ny nampitan�ny Tompo ho antsika io rijan-tenim-pivavahana io, dia nampiany hoe : �Mangataha, dia hahazo ianareo� (Jo 16,24). Ny tsirairay �ry dia samy afaka manondrotra vavaka samihafa any an-danitra araka ny ilainy, nefa ny anombohana lalandava izany dia ny Vavaky ny Tompo, izay mitoetra ho vavaka fototra�. (KFK 2761)
Ambaran�ny Katesizin�ny Fiangonana Katolika, amin�ny famintinana ny Fizarana fahatelo mikasika ny fiainam-pinoana fa Ny faniriana ny fahasambarana tena izy no manafaka ny olombelona amin�ny firaiketam-po tafahoatra amin�ny haren�ity tany ity, mba ho tanteraka ao anatin�ny fahitana sy hasambaran�Andriamanitra izany. �Mihoatra ny hasambarana rehetra ny fampanantenana hahita an� Andriamanitra. Ao amin�ny Soratra Masina, ny hoe mahita dia mahazo no heviny. Ilay izay mahita an�Andriamanitra dia nahazo ny soa rehetra izay azony nosaintsainina� (Gr�goire de Nysse). Saingy amin�ny andavanandrom-piainana dia tsy izany loatra no miseho.
Zava-poana dia zava-poana hoy ny Mpitoriteny (Mpitory 1, 2-23) zava-poana ny hisasarana raha tsy ho fanorenana izay maharitra mandrakizay. Izany no amafisin�i Md Paoly amin�ny taratasiny hoe : katsaho ny zavatry ny lanitra (Kol 3, 1-11). Izany fikatsahana ny zavatry ny lanitra iznay anefa dia tsy mamela antsika hidonanam-poana fa kosa hamono ny rantsam-batana, dia ny an'ny ety an-tany, izany hoe: ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny fahavetavetana, ny fanirian-dratsy, ary ny filan-dratsin'ny nofo izay fanompoan-tsampy; fa izany rehetra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy finoana.
Miankina amin�izay heverintsika ho harena anefa izany. Ilay olona nangataka tamin�i Jesoa ho vavolombelona amin�ny fizarana ny lova, dia manambara antsika ny toetsaina indraindray mahazo antsika koa, izany hoe manao an�i Kristy sy ny fiangonany ho antom-pivelomana. Mitamberina ato an-tsaiko ny tenin�i ED Andriamalala, anisan�ny olomangan�ny fanoratana nianarana fahiny tao amin�ny Ilay vohitry ny Nofy hoe : raha hadihadiana ny loharanon�ny harem-be rehetra dia loto sy fotaka avokoa no miboiboika avy ao.
Soa ihany fa tsy miankina amin�izay fananany ny ain�ny olona. Fiononana ho an�ny mahantra izany, na dia fijaliana ihany koa aza ny tsy fahampiana. Ambaran�i Jesoa mazava anefa fa ny harena ao amin�Andriamanitra ihany no maharitra mandrakizay. Ny vavaka nandritra ny herinandro mivalona iny dia mampahatsiaro antsika ny tokony hampir�na mandrakariva ny saina amam-panahy amin�ny fikatsahana ny haren�ny lanitra na dia miondrika mampias any zava-mandalo aza.
Toa zary nofy anefa ny haremm-panahin�ny Ntaolo, milaza fa aleo very tsikalakalam-bola, toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Indrisy fa ny vola no maha-rangahy ka te ho rangahy avokoa isika rehetra, dia adino fa ny rangahy koa mety hiaran�ny fahafatesana. Loza!
Hifampitondra am-bavaka isika mba hahaizantsika mandalanjanja ny fampiasana ny haren�ny tany, ho tonga rakitra maharitra ho lovaina any amin�ny mandrakizay.